Skyfall: panicle hydrangea dịgasị iche iche, nkọwa, ịkọ na nlekọta, ịkụ - Osisi - 2020
Hydrangea Skyfall (Hydrangea Paniculata Skyfall)
N’oge izizi, ndị na-ege ntị sara mbara nwere ike ịmasị maka ifuru nke egwu hydrangea nke Skyfall dịgasị iche iche na Ngosipụta Plantarium International na 2018. Ihe ngosipụta ya bụ nnukwu inflorescences buru ibu na-enweghị atụ, na ọkwa tozuru oke karịa oke nke isi okenye.
Nkọwa nke hydrangea skyfall
Varietydị ahụ dị iche iche bụ ụdị hydrangeas (Hydrangea Paniculata), nke kachasị mma maka ịkụ ihe na ubi na akwa ifuru. Ndị nna ochie nke ụdị ngwakọ n’oge a mụrụ site na afọ 5, na ụdị ndị ọhụrụ, dịka Skyfall, mepee akpa ha n’ime afọ nke atọ nke ndụ ha.
Ngwurugwu hydrangea na-enwe egwu
Enwere ike iji okpueze kpube okpueze ahụ, na-ahapụ ihe ngosi kachasị sie ike, ma bechapụ obere. Ma ọtụtụ mgbe, a na-ahụkarị panna hydrangea site na oke ọhịa nwere ọtụtụ inflorescences. N'okpuru ibu ha, zuru ezu mkpa Ome ga, nke chọrọ nzukọ nke na-akwado gburugburu okpueze.
Mmalite na ọdịdị
Hydrangea Paniculata Magical Candle - Nkọwa
Ka alaka ndị ahụ na-etolite, osisi ahụ na-etolite ụdị kọmịkọ kọlọtọ nwere ome siri ike. Ogo kachasị mma: 1.2 m - elu, 70 cm - obosara. Ihe di iche iche adabara maka itolite na ahihia ahihia, dika n’ime tub na ite. Ọ dị mma n'anya naanị ya na otu dakọtara. Na-ahọrọ ebe ndobere nke nwere ndo, mmiri na-eme nri ma nke ọma. Ọ na-egbochi frosts ruo -30 Celsius С.
Etu esi eme hydrangea skyfall
Ke July, n'elu nke Ome kpuchie na buds blooming ke nnọọ nnukwu panicles. Ogo nke inflorescence karịrị 30 cm n'ịdị elu ma karịa ihe karịrị cm 15. Ọdịdị ahụ dabara adaba.
Hydrangea Inflorescence Skyfall
Ozugbo ituchara okooko osisi, okooko osisi ahụ nwere ezigbo ọcha ma ọ bụ nwee obere ndo na-acha akwụkwọ ndụ, jiri nwayọọ nwayọọ nweta ụda pink. Ifuru osisi ifuru. Na mkpokọta, myirịta na-achọpụtara site na hyacinth na lila-acha nke nwere nnukwu agba.
Maka ozi! Ugbo na-agwụ na ngwụsị Septemba n'okpuru ọnọdụ ihu igwe dị mma (okpomọkụ ikuku dị elu karịa 20 Celsius).
Transplant mgbe azụtara ke oghe ala
Oge kachasị mma maka ịkụ ihe bụ tupu ahịhịa emeghe ma ọ bụ mgbe akwukwo daa. N'ọnọdụ ụra, osisi ahụ na-anabata ntụgharị nke ọma. Ma ọ nwere ikike n'ụzọ zuru oke ịkọ hydrangea n'oge okpomọkụ tupu buds apụta na nsọtụ Ome.
Attentionaa ntị! Oke kacha nwee ihe ịga nke ọma na -eme ka ihe eji eto nwere usoro eji emechi emechi.
Ihe ịchọrọ maka ọdịda
A na-ahọrọ ebe maka seedling n'akụkụ ndo, nke ga-echebe osisi ahụ site na oke ikuku siri ike. Akwa ndị dị nso na mgbidi ụlọ ahụ, tinyere ngere, ga-eme. A na-atụ aro ka ị zụta ma wụnye ihe nkwado n'akụkụ oke ohia ọ bụla maka inflorescences ga-eme n'ọdịnihu.
Họrọ ebe kacha mma
Na mgbakwunye na mkpa iji chebe ohia site na ifufe, ọ dị mkpa ịhọrọ saịtị ebe ala mmiri dị omimi karịa 1.5 m. Hydrangea panicle anaghị anabata mmiri ide mmiri na ịhụnanya ya niile maka mmụba mmiri.
Attentionaa ntị! N’akụkụ, ọnụnọ nke nnukwu osisi nke nwere okpueze translucent bụ ihe a na-anabata nke ọma, nke ga-enye ndo dị mkpa, n’ihi na, ịnọ n’okpuru anwụ ụbọchị niile, hydrangea na-anyụ ọkụ ngwa ngwa.
Nzọụkwụ usoro nzọ ụkwụ
A na-ebuda ọdịda na usoro ndị a:
Gwuo olulu mmiri 50 × 50 cm na omimi nke opekata mpe 50 cm.
A na-awụnye bọket mmiri n'ime ya.
Mgbe ụbọchị gasịchara, a na-eme akwa mmiri na-agbapụta na ala nke olulu ahụ. Nnukwu jackdaw, brik agbajiri agbaji, ụrọ gbasaa, obere unyi ga-eme.
Ọ bụrụ na a na-akụ ọtụtụ seedlings otu mgbe, mgbe ahụ ha na-elekọta anya nke dịkarịa ala 70 cm n'etiti ha.
Dozie ala maka azu azu site na ijikota ala na - eme nri (pH = 5.5) na aja n’ime uzo 2: 1. Na mgbakwunye, 40-50 g nke superphosphate na-agwakọta.
Na ala, guzosie nkwado maka idowe aka ahụ.
Gbasa mgbọrọgwụ ma wedata mkpụrụ n’olulu ahụ, ha mejupụtara ala na-eme nri.
Akpata mgbọrọgwụ kwesịrị ịdị ala.
A na-agba mmiri Hydrangea nke ukwuu ma na-agbasa gburugburu okporo osisi na mulch site na agịga, sawdust, na ahịhịa ahịhịa.
Skyfall Hydrangea Propagation
Hydrangea Samara Lydia (Hydrangea Paniculata Samarskya Lydia)
Hyddị hydrangea na-atụ ụjọ bụ nke usoro ahịhịa na-agbasa ngwa ngwa: ibe, ịkpụ na ikewa ọhịa. Site n'otu ohia mgbe afọ 1-2 gachara, ị nwere ike nweta ọtụtụ ihe ọkụkụ.
Oge kacha mma iji egbutu ibe ya bụ oge ọkọchị tupu akwụkwọ ya apụta. Bee mkpirisi ahihia dika nkpuru osisi abuo.
Mkpụrụ osisi Hydrangea
A na-ebipụ ahịhịa na ọkara ma wedata ya na mmiri ma ọ bụ ala. Ọtụtụ mgbe, ọdịdị nke mgbọrọgwụ na-ewe izu 3-4. A na-ebugharị na mbara ala mgbe otu afọ gachara.
Na-eto eto si na-akpụ akpụ
A na-enweta akwa na June site na obere Ome, nke na-agbada ala ma chekwaa ya na eriri waya. Wụsa elu n’elu ala 2-3 cm. N'ọgwụgwụ August, a ga-egwu ala osisi ada gbanyere mkpọrọgwụ ma gbanye ya n’ebe ga-adịgide.
N'oge opupu ihe ubi, mgbe ala na-amị, a na-egwu ala ahụ ma kee ya ụzọ abụọ. A na-akụ akụkụ nke ọ bụla n'ime ebe ọhụụ dịka nkwenye izugbe maka ịhọrọ ebe na ịkwadebe ngwakọta ala na-eme nri.
Nlekọta Hydrangea Skyfall
N'oge oge oyi, ohia na-eweta ọ joyụ karịa nsogbu, nke ndị ọrụ ubi gbara gburugburu ụwa hụrụ ya n'anya.
Dị Mkpa! Akacha kwachaa a na-eme n'oge opupu ihe ubi. Na ngwụsị March, ha na-ahapụ ome 10 kachasị sie ike, na-ebelata ihe ruru obere ụzọ atọ nke 3-5.
Hydrangeas niile na-atụ ụjọ bụ ezigbo hygrophilous. N'otu oge, ha na-ahọrọ ihe nro nke agbachitere. Ọ kachasị mma ịnwe gbọmgbọm dị nso maka sludge site na ebe ọ ga-ebu ma wụsa bọketị 2-3 ụbọchị atọ ọ bụla n'okpuru ọhịa ọ bụla.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, a na-atụgharị nri ala gburugburu bushes. N'oge opupu ihe ubi, mgbe ị na-atọpụ, 40 g nke superphosphate na-agbakwunye. N'oge ọkọchị, tupu ịmịkọ, ọ bara uru ịgbakwunye ihe nrea nke urea (25 g kwa 10 mmiri mmiri).
Njirimara nke nlekọta n'oge oge okooko
Mmiri ifuru osisi bụ ihe mara mma n'anya. Dịka osisi osisi ornamental niile, o kwesịrị ị paya ntị, na-akpachapụ anya na-egbuchapu ihe ọ bụla na-emebi ihe ahụ: adịrị inflorescences, agbaji agbaji, akwụkwọ nkụ, wdg.
Bee okpukpo ahihia hydrangea
Njirimara nke nlekọta na ezumike
Ọ bụ n'oge a ka akachasị mma maka ọgwụgwọ megide nje na ọrịa. Site na oge nke izu abụọ, a na-efesa bushes ahụ na azịza mmiri Bordeaux, ntọala, acaricidal.
Nkwadebe oge oyi
Na-eto eto bushes nwere ike ikwu ndo ke iduọ ozugbo ịkwụsị N'ụbọchị nke akwụkwọ. Iji mee nke a, wụnye arches ma ọ bụ ụlọ akụrụ site na slats, nke ị nwere ike ịdọrọ agrotextile na-enweghị aka ma ọ bụ mepụta mkpocha ahịhịa nke agwakọtara na agịga.
Nlekọta dị mfe ma kwekwaa nkwa nke ezigbo ọfụma ruo ọtụtụ afọ - uru dị iche iche. Oke ohia nke Skyfall hydrangea ga - ewetara onye nwe ya otutu oge di nma. Mgbe otu afọ ma ọ bụ abụọ gasịrị, ọ bụrụ na achọrọ, ị nwere ike ịgbasa ya site na icho mma akwa ifuru.